Sida loogu isticmaalo Gmail taleefankaaga adigoon isticmaalin barnaamijka | Androidsis
Gmail waa barnaamij muhiim u ah inta badan isticmaaleyaasha Android. Intaas waxaa sii dheer, se si joogto ah ayaa loogu cusbooneysiiyaa sifooyinka cusub, taas oo iyaga ka dhigaysa kuwa iyagu xiisaha noo leh. In kasta oo arjigu aanu ahayn habka keliya ee aan ku heli karno sanduuqayaga, maaddaama ay jiraan siyaabo kale oo si fudud loogu sameeyo.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ayaa ah adeegsiga Telegram. Codsiga farriinta caanka ah ayaa ah mid ka mid ah barnaamijyadan na siiya xulashooyin badan. Midkood waa suurtagalnimada gal sanduuqayaga 'Gmail' adigoon waligaa isticmaalin barnaamijka. Aad u raaxo badan oo xiiso leh.
Sidee tani ay suurtogal u tahay? Waxaan fursad u leenahay inaan ku isticmaalno bot a Telegram. Sidaan horeyba u isticmaalnay bot si aan u dirno farriimaha ku dhaca barnaamijka, waxaan leenahay bot oo noo ogolaanaya inaan si fudud ugu galno akoonkeena Gmail. Marka waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa qaabkan si aan u marinno.
6 Boot oo loogu talagalay Telegram oo aad jeceshahay
1 Gundhig Telegram
2 Sida loo isticmaalo Telefoonka Gmail Bot
3 Miyuu botani amaan yahay in la isticmaalo?
Boodhka su'aasha ah ee aan isticmaali karno waqtigan waa Gmail Bot. Waa bot kaas oo siiya dadka isticmaala isdhexgalka sahlan ee xisaabtooda Gmail. Marka iyagu marin ayey u heli karaan marwalba oo markaa way hubin karaan mailkooda, si toos ah Telegram goor walba. Waxay la mid noqon doontaa adeegsiga barnaamijka boostada, kaliya xaaladdan waxaan isticmaaleynaa barnaamijka farriinta ee taleefanka.
Sidoo kale, waxaan haynaa inta badan howlaha la heli karo. Haddii qof noo soo qoro emayl, waxaan awoodi doonnaa inaan uga jawaabno Telegram. Waxaan sidoo kale soo diri karnaa fariimo cusub, u gudbin karnaa ama ku dari karnaa lifaaq. Sidaas awgeed waxaan haysannaa xulashooyin nagu filan oo arrintan laxiriira si aan uga faa'iideysanno botkaan ku jira arjiga. Gaar ahaan falalka ugu caansan ee aan ku isticmaalno arjiga.
Xaaladda lifaaqyada, waxay taageertaa ilaa 21MB. Marka waxaan leenahay qaddar la mid ah tan ay hadda Gmail na siiso arrintan. Waxay u oggolaaneysaa khibrada isticmaale inay la mid noqoto kiiskan, sidaa darteed isticmaalku uu yahay mid raaxo leh oo fudud sida ugu macquulsan mar walba. Sidaad u aragto, waa bot kaas oo na siin kara fursado badan oo Telegram ah. Sideen ugu isticmaali karnaa taleefankeena?
Sida loo isticmaalo Telefoonka Gmail Bot
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa helitaanka bogga Gmail Bot, in aad ka arki karto xiriiriyahan. Waa inaan ku furnaa arjiga, ama boggiisa ama nooca taleefankiisa. In kasta oo aan xiiseyneyno barnaamijka Android inuu yahay midka aan u adeegsan doonno inaan ku furno bot-kan waqtigan. Waa inaan wadahadal furnaa oo aan aqbalnaa isticmaalka bot-ka. Sidan oo kale, koontadayada horay ayaa loo diiwaangelin doonaa.
Tallaabada xigta waa inaan ku dhaqaaqnaa gasho akoonkeena Gmail. Tani waxay u maleyneysaa inaan soo bandhigno magaca isticmaalaha iyo lambarka sirta ee isku mid ah, si aan ugu helno koontada. Tallaabooyinka aan ku qaadno kiisas badan si aan ugu helno. Wixii hada ka dambeeya, waxaan horey u heleynaa sanduuqa lagu wada sheekeysto ee Telegram. Laga soo bilaabo wixii aan ka arki karno barnaamijka markii aan farriin ka helnay cinwaanka emaylkeena. Ogeysiisyada ayaa lagu helayaa arrintan, si la mid ah tan iyo hadda.
Markii aan helno emayl, waxaan arki karnaa in wadahadalka Telegram aan ku haysanno xulashooyin sida kuwa ka muuqda Gmail. Hoos ka dhambaal kasta waxaan leenahay suurtagalnimada in laga jawaabo, loo calaamadeeyo inay tahay spam ama haddii aan rabno waan tirtiri karnaa si toos ah, haddii ay dhacdo inay tahay emayl aan innaba ina danaynayn innaba. Markaa waxaan ku maamuli karnaa sanduuqa sanduuqaaga barnaamijka si fudud oo dhib la'aan ah, kaliya wixii aan ka dooneynay kiiskan.
Miyuu botani amaan yahay in la isticmaalo?
Waa mid ka mid ah shakiga weyn ee isticmaaleyaasha arrintan la xiriira. Gmail Bot waa bot aqoonsi leh oo la xaqiijiyay, taas oo badanaa ah dammaanad in ay amaan tahay, taas oo runtii nasiin karta xoogaa nasasho maskaxeed ah. In kasta oo la siiyo gelitaanka koontada emaylkaagu waa wax had iyo jeer abuura cabsi ama walaac, sida caadiga ah. Mabda 'ahaan waxay umuuqataa in aysan jirin wax dhibaato ah oo arintaan kusaabsan bot, sidaa darteed waa amaan.
Telegram waa barnaamij u janjeera inuu si aad ah uga taxadarayo arrinta arrimaha gaarka ah, sidaas darteed waa in loo qaataa inay iyagu si lamid ah ku sameeyeen kiiskan, iyagoo dib u eegay tan Gmail-ka. Sikastaba xaalku ha ahaadee, hadii ay jiraan wax kugu kallifaya inaad ka shakido in bot-kani uusan si wanaagsan u shaqeynayn ama laga yaabo inuu dhibaato keeno, waanu kaaga warrami doonaa mar walba. Maaddaama ay tahay macluumaad muhiim ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo adeegsado Gmail on Android adiga oo aan isticmaalin barnaamijka